Jizọs ga na 1 na 2 Thess
Ugbua ke akpa ibuot ebe Paul kwuru banyere ozizi ndị bụ isi nke Mmụọ Nsọ ma ọ bụ Assembly nchegharị, dị ka o kwuru n'otu oge ihe ga-ọgbakọ olileanya na-atụ anya, ya bụ na nl
Akpa, owuwe ihe dị mkpa mmụta kwesịrị akụkụ nke Assembly na ntọala na-ekwusa ozi ọma. Ọ bụkwa otu ihe nke bụ iche iche na iche na ikwu Jizọs anya bịa n'ụwa, na kama a nkọwa nke Jehova nke gesi heaven iji weghachite na tuwichi ọgbakọ ya onwe ya. Owuwe bụkwa a ịdịghachi anyị hụrụ n'anya, onye n'out oge na owuwe na ndị nwụrụ anwụ.
Ọnụ na 1 Kọrint 15, dị ka bụ akwụkwọ ozi Pọl degaara ndị chọọchị na Tesalonaịka, ụfọdụ nke akwụkwọ ozi na ya kacha mma na-akọwa na nloghachi nke Jesus. Letters azịza na-agụnye okwu ihe owuwe bụ, na mgbe ọ pụtara.
Nke a bụ a nyochaa nke Pọl akwụkwọ ozi abụọ na-enye anyị ihe nghọta nke ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ, na mmekọrịta dị n'etiti Jizọs Kraịst ụbọchị onye bụkwa uppryckelsens ụbọchị, na ụbọchị Jehova bụ Jizọs abata ikpe n'ihi na nke a ụwa. The akwụkwọ ozi na-agba ume anyị n'otu oge na-ebi a mgbe nile na-atụ anya Jizọs lọtara, na-enye anyị ike na nkwa nile doro anya na-chebere si iwe nke Chineke.
Background nke akwụkwọ ozi
Pọl degaara akwụkwọ ozi ndị a dị nnọọ obere oge mgbe ọ tọrọ ntọala na chọọchị na Tesalonaịka. On ya nke abụọ njem ozi ala ọzọ, Paul wee obodo, ebe a na chọọchị e guzobere (Ọrụ 17: 1).
N'ihi na nke iguzogide ozi ọma na-aghọ Paul ama efehe, na ọ na-ede akwụkwọ ozi na-agba ume n'ọgbakọ mgbe o site Timoti nụrụ banyere ha ịnọgidesi ike n'ihe, na okwukwe na ịhụnanya.
Owuwe - otu ihe dị mkpa ozizi
Ọtụtụ ndị na-eleghara owuwe dị ka ihe dị mkpa ozizi ma ọ bụ izi ihe. Ụfọdụ Ndị Kraịst ekweghị na ya nanị, ma ọ bụ ọ pụtara na ọ bụ naanị ga-aghọta ihe atụ ma ọ bụ atụ. Ndị ọzọ kweere na owuwe bụ dị nnọọ mma, ma na ọ ekpuchi ndị ka mkpa ozizi dị otú ahụ dị ka Atọ n'Ime Otu ma ọ bụ baptism.
Site n'ebe ahụ, Paul tọrọ ntọala ọgbakọ na ruo mgbe ọ na-ede akwụkwọ ozi ndị a, ọ bụ banyere 6-12 ọnwa. N'ihi ya, ọ bụ ndị ọzọ okwu a dị obere ọgbakọ na Pọl na-ede na. Ma ọbụna ma ọ bụrụ na ndị a bụ pụtara ọhụrụ na okwukwe, zoro ezo ma ọ bụ omitted Paul ghara izi ma ọ bụ na-ekwu banyere Jizọs laghachi.
Ugbua ke akpa ibuot ebe Paul kwuru banyere ozizi ndị bụ isi nke Mmụọ Nsọ (Amaokwu nke 5) ma ọ bụ Assembly nchegharị (amaokwu 9), ya mere, ndi nke ozo ahu o kwuru ya na-ọgbakọ olileanya na-atụ anya, ya bụ na nloghachi nke Jisos (v 10).
A mụrụ n'oge mkpagbu
The chọọchị na Thessalonica mụrụ ma biri na mgbe mgbe mkpagbu n'ihi okwukwe ha. Ha nwere otu mkpagbu ndị Juu, na ma Jizọs ma ndị amụma mbụ nwetara (v14).
Akwụkwọ ozi ndị na-agba ume ka chọọchị na-anọgide na-eje ije na okwukwe na ha ifịk n'ime Onyenwe anyị. N'oge oké mkpagbu na ahụhụ ha natara ozi ọma, na ama chegharịrị ya arụsị. Ugbu a, ha bufee Onyenwe anyị ma na-eje ozi nanị otu ezi Chineke.
Gịnị bụ owuwe?
Ọ bụrụ na anyị na-na-na-akọwa na-akọwa ihe owuwe bụ, na e nwere ọtụtụ n'akụkụ na ihe ndị mejupụtara ihe onye nwere ike banyere:
E nweghị tupu-eru nkwa banyere owuwe nke ụka na pụtara na ọ bụ "nso" ma ọ bụ yiri. Nke a pụtara na chọọchị ga-ebi mgbe nile na-atụ anya nke Onyenwe laghachi, na Jizọs bụ ga-eme ka anyị n'ụlọ. Mgbe ọ na-kọwara dị ka n'elu na otu ume dị ka oké mkpagbu, nke pụtara na ọ bụ akụkụ nke usoro na-anabata ndị na-amalite ụbọchị Jehova ma ọ bụ mkpagbu. Otu oge Jehova na-enye ọgbakọ ibé gaghị a akụkụ nke.
Owuwe - HARPAZO
1 Ndị Tesalonaịka 4: 16-17 - N'ihi na mgbe a oké iwu, a olu onyeisi ndị mmụọ ozi na trump nke Chineke, Onyenwe anyị n'onwe ya ga-ịgbada heaven. Na naanị ndị nwụrụ anwụ na Kraịst ga-ebili. Mgbe ahụ anyị nke dị ndụ ma na-anọgide ga-ejide elu (harpazo) na ígwé ojii na ha izute Onyenwe anyị na ikuku. Na otú anyị ga-ebi na Onyenwe anyị.
Okwu ahụ bụ "owuwe" sitere a amaokwu Baịbụl a na-si sụgharịa okwu Grik "harpazo" ka "a ga-ejide elu." Nke a na okwu "harpazo" bụ nanị kwuru ugboro 13 na NT na na-na-eji na 1 Ndị Tesalonaịka 4 na njikọ na owuwe nke ọgbakọ.
"HARPAZO" (nwere-na mpe mpe akwa-zo) bụ Grik na pụtara "poach" na-ma ọ bụ ịghọta na mberede. Harpazo ghọrọ Latin okwu "raptus," bụ nke n'aka nke ghọrọ okwu Bekee "owuwe." Na Sweden anyị sụgharịrị ịbụ echiche nke "The owuwe" na owuwe.
Ọ bụ na-akpali ịhụ otú e ji okwu na-akọwara na NT n'ihi na ọ na-enye anyị ghọta ihe okwu, na nghọta nke oge Assembly na-ejide elu ka Jehova izute ya na mbara igwe. Anyị na-ezute okwu harpazo ma na njikọ na Jesus, Paul, Philip, Jọn Baptist na Jizọs kwere nkwa na ụmụ Ya.
2 Ndị Kọrint 12: 2 - Amaara m otu onye n'ime Kraịst onye afọ iri na anọ gara aga e jidere elu (HARPAZO) ka atọ heaven - ma na ahụ ma ọ bụ n'èzí ahụ m na-amaghị.
Paul e jidere ruo heaven ebe ọ keere òkè ná omimi nke Chineke. Otu okwu HARPAZO a na-eji nke Jizọs Mkpughe na-akọwa Ascension mgbe mbilite n'ọnwụ
Mkpughe 12: 5 - O wee mụọ nwa, a nwa nwoke, bụ onye na-achị achị mba niile na ígwè mkpanaka, na nwa ya nọ na-ejide elu (HARPAZO) Chineke na n'ocheeze ya.
Matthew 11:12 - Ma site na ụbọchị nke Jọn Baptist ruo ugbu a, alaeze eluigwe doro ime ihe ike, na ndị ikom nke ime ihe ike emegbu (HARPAZO) ya.
Na njikọ na Jọn Baptist ozi na-aghọ okwu HARPAZO-ejikwa. Mgbe Jizọs nọ n'ụlọ mkpọrọ, ọ na-ekwu n'ụzọ ihe atụ banyere Jọn na njikọ na (ezi) ime ihe ike na Nelly onye-emegbu ndị na mbara igwe. (Were ya site na ike eng. Translation) iji mejuputa ihe site na ike / ike bụ a pụtara okwu HARPAZO.
Mgbe Jehova na-abịa na-akpọkọta ndị ya, ọ ga-apụnara ndị Assembly na ike.
Filip onye na-ezisa ozi ọma
Ọrụ 8:39 - Mgbe ha wee si n'ime mmiri dọwaa (HARPAZO) Jehova pụọ ​​Philip, na ọnaozi hụrụ ya ọzọ, ma wee gawa, ya aṅụrị ọṅụ.
Philip ama site na mmụọ ozi a na-akpọ site na Chineke na-aga n'okporo ụzọ ahụ nke na-aga site na Jerusalem ka Gaza. Ebe Philip akụrisị ihe ọnaozi Etiopia na-Philip-ekwusa ozi ọma. Mgbe Philip ama aruzu ha ozi, na-ekwusa ozi ọma na baptism ọnaozi, Philip Nwela dọrọwo site Jehova ebe ọzọ n'ụwa.
Na-ejide pụọ ọzọ okwu ka a kpaliri na elu na-ejere Jehova, ma n'ụwa ma ọ bụ n'eluigwe.
Ọ dịghị onye pụrụ ịpụnara gị nke aka Jehova
John 10: 28-29 - m na-enye ha ndụ ebighị ebi na ha agaghi-ala n'iyi, ọ dịghịkwa onye ga-apụnara (HARPAZO) ha n'aka m. Gịnị m Nna m nyere m ka ukwuu karịa ihe niile, na ọ dịghị onye pụrụ ịpụnara (HARPAZO) ha si m n'aka Nnam.
Nke a bụ ihe ịtụnanya Itie na-egosi na Onye Ọzụzụ Atụrụ obi n'ihi atụrụ ya. Ọ maara anyị, anyị na-ege ntị n'olu ya na-eso ya. Nkwa na ọ na-enye anyị bụ na ọ dịghị onye ga-enwe ike "apụnara" anyị n'aka ya. Nna nyere Ọkpara ahụ apụghị ohi ọzọ.
Ọ na-enye anyị nzọpụta nche na n'aka na ihe nwere ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke na Jizọs. Setan ma ọ bụ ọnọdụ, na ndị ọzọ okwu, adịghị na-anapụta anyị n'ebe ọ nọ pụọ.
Owuwe bụ yiri
1 Ndị Tesalonaịka 4:15 - na anyị asị unu site n'okwu Jehova, na anyị nke dị ndụ ma na-anọgide na-abịanụ nke Onyenwe anyị ga-egbochi ha na-ehi ụra
1 Tesalonaịka 1:10 - Ma ichere maka Ọkpara ya si n'eluigwe, Chineke kpọlitere n'ọnwụ, Jizọs bụ onye napụtara anyị iwe na-abịa.
Otu n'ime ndị kasị mkpa akụkụ nke owuwe bụ na ọ bụ "nso," nke pụtara na ọ na-metụtara, na ihe ị ga-atụ anya na-eme n'oge ọ bụla.
Owuwe Na ọzọ okwu, ihe unsigned na-abịa, na e nwere ndị ọzọ okwu, ọ dịghị amụma ihe ịrịba ama nke ga-ebu owuwe, ma ọ bụ ihe na Assembly kwesịrị maara nke ga-eme n'ihu ya na ihe a merenụ nwere ike ebe.
Paul na-eji okwu "anyị" mgbe o kwuru banyere ndị dị ndụ ma na-anọgide na-abịa nke Jehova, nke na-atụ aro na owuwe isi ugbua nwere ike ime n'oge Paul.
James 5: 8 - Na-unu nakwa inogide na ike gị obi, n'ihi na nke na-abịa nke Jehova dị nso
Track nke Paul ụbọchị Jehova nloghachi nso, na ọ na-agba ume n'ọgbakọ na-ebi mgbe nile na-atụ anya nke Jizọs si n'eluigwe.
Mgbe anyị na-ekwu na-akọwara oge anyị nke anyị bi na, ma kwere na anyị bụ ndị ọgbọ na ga-ahụ Jehova lọta, ọ bụ n'ihi na anyị na-atụnyere ndị amụma agwa nke mkpagbu. N'ihi ihe ịrịba ama na anyị pụrụ ịhụ na Jehova na-Day na-eru nso, na na mụrụ ụfụ mụbaa. Na ndị ọzọ okwu, esịtidem na mpụga ihe ịrịba ama nke na-egosi na nke 70 na nke ikpeazụ izu nke afọ a na-eru nso, na otú ahụ nwekwara owuwe nke ọgbakọ.
Förväntningens mkpụrụ osisi
Mgbe anyị na-ebi kwa ụbọchị na-atụ anya n'ihi na Jehova na-abịa azụ, ọ na-emepụta ma a förväntningens ọṅụ na a agụụ maka ya na-abịa.
The na-atụ anya na-eme ka ndị nwunye na-na-njikere, na-ebi ndụ a nsọ ndụ, na e kenyere ya ọzọ oke. Ọ na-emepụta mkpa maka a furu efu ndi mmadu nke Onyenwe anyị chọrọ iru ya n'anya ma na-azọpụta ike. Ọ na-eme nke a dị mma usu na ihe pụtara obere na ikwu na mmụọ eziokwu na ọtụtụ puku ndị mmadụ na-enwe kwa ụbọchị mgbe ha na-aga ruo mgbe ebighị ebi na-enweghị Chineke na-enweghị olileanya.
Na otu oge, ná ngwụsị afọ ndị 1800, mgbe Onyenwe anyị ọzọ kpọlite ​​ndị nkuzi nke a yiri owuwe, ụwa nwere otu n'ime taa akụkọ ihe mere eme kasị ukwuu ozi ala ọzọ na evangelization ugboro. N'out oge na okwu amụma ghọrọ ndụ, ọkụ gospel ọkụ gburugburu ụwa.
The akwụkwọ ozi ndị chọọchị na Tesalonaịka bụ Pọl eschatological akwụkwọ ozi. Anyị nwere ike mere na-atụ anya na Pọl ma na-akụzi na-ekwu banyere oké mkpa ihe ndị na owuwe, àmà na-egosi performanc na mkpagbu.
2 Ndị Tesalonaịka bụkwa otu n'ime ihe ndị kasị controversial akwụkwọ ozi na NT, na ikwu na oge mgbe n'ihi na owuwe nke ụka nke Chineke.
Ihe na-arụsi parish
N'ọtụtụ ụzọ, ọgbakọ si bụrụ ihe nlereanya nye ndị ọzọ kwere ekwe (1 Ndị Tesalonaịka 1: 8). Ọ bụ a na chọọchị na biri na mgbe nile na-atụ anya Jehova nloghachi. Ha chegharịrị nke arụsị, ma na-echere ugbu a na Jizọs echiche site heaven (1 Ndị Tesalonaịka 1:10).
N'akwụkwọ ozi mbụ ya na Pọl na-agba Assembly na-anọgide na-ebu ha ọrụ na-ebi ndụ a kwesịrị ndụ, n'otu oge na ha nọ na-eche na Chineke (4: 11-12). Ọ akasi ha site na agwa anyị na anyị ga-ahụkwa ọzọ hụrụ n'anya bụ ndị na-ama na-arahụ n'ụlọ tupu anyị, mgbe ndị nwụrụ anwụ bilie n'out oge na owuwe nke ndị dị ndụ.
Pọl akwụkwọ ozi nke abụọ
Nke abụọ Pọl akwụkwọ ozi e dere banyere ọnwa isii mgbe e mesịrị karịa nke mbụ. Ọ na-ede na chọọchị iji dozie ma mezie asịrị ụgha na ozizi ụgha ndị mere seere na Assembly.
Ọgbakọ ahụ egwu na mgbagwoju anya banyere ụbọchị Onyenwe anyị, na domstid ga-nke ụwa. The asịrị ụgha na boro akwụkwọ ozi si n'aka Paul, chere ugbu a na ọgbakọ na ha bụ ndị na-ama n'ime nke a domstid bụ nke na-mkpagbu.
Nke a bụ ihe na Pọl kọwara n'ụzọ doro anya ma okwu ọjọọ na site ozi mbụ o degaara ndị Tesalonaịka. Ya mere ọ na-ede akwụkwọ ozi a dokwuo anya ma mezie ndị a nghọtahie.
Ụbọchị Onyenwe anyị, iwe Chineke na Assembly ọpụpụ
Na nke abụọ Pọl eschatological degaara ndị Tesalonaịka bụ karịsịa n'akụkụ anọ nke na m chọrọ dee na-elekwasị anya na onye bụ ụbọchị Onyenwe anyị, iwe Chineke (Orge), Onye esetịpụ azụ, na okwu "apostasia", nke nwere ike pụtara n'efu ma ọ bụ ọpụpụ (owuwe) .
N'ikpeazụ, anyị na-ele anya a nta karịsịa ná 2 Ndị Tesalonaịka 2:13, mgbe nso nnyocha bụ ihe ịtụnanya amaokwu nke na-ekwu okwu ma na-akwado na achikota Paul ozizi na Assembly na a owuwe tupu mkpagbu.
Nke mbụ, ọ dị mkpa ka dokwuo anya ihe ụbọchị Onyenwe anyị bụ n'ezie. Ọtụtụ ndị na-akwa na-ezo aka na ụbọchị Onyenwe anyị dị ka a kpaara ókè na kpọmkwem ụbọchị nke awa 24, nke na-ewe ke utịt mkpagbu mgbe Jesus anya nloghachi. N'ihi ya ọ pụtara na ụbọchị Jehova na owuwe na-agakọta na-apụ na otu.
Eleghị anya ndị kasị hotara n'amaokwu a bụ nnọọ 1 Ndị Tesalonaịka 5: 2, nke kwuru banyere owuwe na njikọ na n'ụbọchị Onyenwe anyị. Ka ụbọchị Jehova na otú ahụ na Jizọs na-abịa dị ka a "ohi n'abalị" na-ejikọ gị na-emegharị ndị a abụọ ihe.
Ma a nyochaa nke ụfọdụ amaokwu Bible na-agwa Jehova Day-egosi na ọ bụghị naanị na ọ na-ezo aka a otu ụbọchị, ma na a oge nke ikpe-ekpuchi ma Mkpagbu, Jesus anya nloghachi na Millennium.
Joel 2: 11-20 - Jehova Day na-agụnye onye agha site na onye iro si n'ebe ugwu, nke ọtụtụ ndị kweere bụ otu ihe ahụ agha anyị na-ahụ Ezikiel 38-39. Ọtụtụ ndị kweere na Gọg / Megọg agha pụtara na akụkụ mbụ nke Mkpagbu.
Joel 3: 4 - a bụ ụbọchị Onyenwe anyị kegide Jesus 'anya nloghachi na ya ikpe na mba.
2 Peter 3: 10-23 - a ụbọchị Onyenwe anyị na-ezo aka Jesus 'anya nloghachi, mgbe ahụ, anyị maara na ụbọchị ahụ nke eluigwe ga-agbaze, na anyị ga-esi n'eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ na akpa ebe mgbe 1,000 afọ nke alaeze n'elu ụwa.
Dị ka onye ohi n'abalị
Paul na-akọwa Jehova Day dị ka ihe omume a na ga-iju, na dị ka onye ohi n'abalị. Mgbe ụwa a anaghị atụ anya ya, ọ ga-dị nnọọ ka na mberede, n'otu ụzọ dị ka mgbe otu nwanyị na-ime na-ekpughe onwe ya n'ụwa a.
Paul emesi Bible si kọwaa ụbọchị Jehova, na-ekwu okwu n'ihi onwe gị banyere ya dị ka a oge mbibi na ihe mgbu. Mgbe e mesịrị na 1 Nke 5: 9, Pọl ji okwu ahụ "iwe ikpe" (orway) chịkọta na bụ otu oge.
Jesus Christ taa
Ndị Filipaị 1: 6 - m n'aka na ọ bụ onye malitere ọrụ ọma n'ebe unu onwe unu aghaghị wuchaa ya ruo ụbọchị Jesus Christ.
Day nke Jehova igosipụta ya mere iwe na domstid ga-esi n'elu ụwa a oge sitere na site owuwe (mkpagbu mmalite) na Millennium. Mgbe anyị na-ekwu banyere owuwe nke ọgbakọ ahụ abụghị ụbọchị Onyenwe anyị, kama ọ bụ aha Jizọs Kraịst taa.
Jesus Christ taa bụ kwuru na Old Testament, dị ka ọ nwere na-ata na nzuzo na-eme, ya bụ, eziokwu nke NT chọọchị, na owuwe nke ebube.
The NT mkpughe
Jesus Christ taa bụ naanị a NT echiche. Jehova Day abụghị nanị onye na OT echiche, ma ikpe oge nke mba ọzọ bụ zuru ezu na NT na karịsịa kọwara ná Mkpughe isi nke 6-19. "Jehova Day" banyere ụwa na ndị mmadụ na ụwa mgbe Jesus Christ taa banyere NT Assembly owuwe na nkwadebe tupu Nna ya n'eluigwe.
Mgbe ọ na-abịa Jesus Christ taa, ọ bụ a benämnelse na ụbọchị mgbe Jizọs ga-abịa n'ígwé ojii na-ike ya nile ọgbakọ ya onwe ya.
Betydningen nke amaokwu a bụ na Mmụọ Nsọ, dị ka na Pentikọst malite ọrụ site na-ahọpụta a eluigwe ndị mmadụ, ga-n'ụzọ zuru ezu iri na-eme ka ndị a zuru ike na-esote Jesus Christ taa, na-esote Jesus ka eme n'ụlọ ya n'ọgbakọ ka eluigwe n'ebe-obibi-- nke si otú na-ewe ebe tupu ụbọchị Jehova.
Chebere si Jehova iwe (Orge)
1 Ndị Tesalonaịka 1: 9-10 - The ha na-ekwu banyere otú anyị natara nke gị na otú ị tụgharịa Chineke si arụsị na-eje ozi ndị dị ndụ na ezi Chineke na-eche ya ka Ọkpara ya si n'eluigwe, Chineke kpọlitere ndị nwụrụ anwụ, Jizọs onye zọpụta anyị n'aka (ek) iwe (orge).
1 Ndị Tesalonaịka 5: 9 - N'ihi na Chineke adịghị inye anyị ka anyị na-ata ahụhụ iwe (orge) kama inweta nzọputa site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst
Otu nke Nga trib ozizi mkpa arụmụka maka owuwe nke ọgbakọ ahụ n'ihu mkpagbu, bụ na Jizọs zọpụta na-azọpụta ya na chọọchị iwe na-abịa. (Eng. Ọnụma na-abịa).
Okwu Grik n'ihe odide mbụ nke iwe bụ Orge, na English pụtara "na-egosi, iwe, ahuhu na ntaramahụhụ. Ya mere nke a bụ oge mgbe iwe Chineke na ntaramahụhụ a ga-wụsara ụwa a.
A general isiokwu
Ma amaokwu Baịbụl ndị a na ihe na-bụ a ugboro ugboro isiokwu na NT bụ na chọọchị na-adịghị kara aka na-ata ahụhụ iwe, ma, kama nke a na-azọpụta ma chebe site na ya.
Okwu ahụ bụ "site" (ek) anaghị aga ebe, ma, kama anya ha si na onye ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla n'ụzọ nkịtị. Jesus na-eji otu okwu mgbe ọ na-akụzi na "wepụ plank na gị onwe gị anya" na Matiu 7: 5th Doo ma ọ bụ splint na-ahụ ahụ wepụrụ ụbọchị n'ebe, na ọ dịkwaghị akụkụ nke anya.
Ọ bụrụ na anyị nwere nkwa ndị a ga-ewepụ ma chebe site na oke iwe nke Chineke, olee otú esop enwe ugbu n'oge mkpagbu?
Zọpụtara si iwe
Rev 6: 15-017 - The eze nke ụwa, ndị ukwu na ndị ọchịagha, ndị ọgaranya na ndị dị ike, ohu nile free, zoro onwe ha na ọgba, na ndagwurugwu, ha gwara ugwu na oké nkume, "Fall na anyị ma zoo anyị iru-ya nọ n'ocheeze na Nwa Atụrụ ahụ iwe (orge). maka iwe ya nnukwu ụbọchị abịa (aorist), na ònye pụrụ iguzo?
First edebata anyị na-ezute a okwu iwe (orge) na Mkpughe bụ nke isii akara. The ngwaa "bịa" bụ a ngwaa (aorist) pụtara na ihe na-ama adị mbụ, ma ugbu a na-hụrụ na-na-isii akara.
Mgbe ị na-anya azụ na ndị gara aga akàrà na ndidi tupu isii, ọ bụ na-adịghị ike ịhụ na a iwe nwekwara jupụtara na ise mbụ akàrà, nke ihe ndị ọzọ emeela ka uwa agha, akụ na ụba hyperinflation, ụnwụ na virus outbreaks; nke mere na a ụzọ n'ụzọ anọ nke bi n'ụwa si n'iyi.
The njedebe nke Isi
Rev 15: 1 - M wee hụ ọzọ dị ukwuu na ebube ịrịba ama n'eluigwe: ndị mmụọ ozi asaa ji ihe otiti asaa, nke ikpeazụ, n'ihi na ha ọnụma nke Chineke na esịmde mmezu ya
Ọtụtụ ndị kweere na a na iwe a akụkụ nke oké iwe Chineke mbụ na-egosi na njedebe nke Mkpughe, ma Bible na-doro anya na na ikpeazụ otiti asaa ụzọ ọpụpụ na bụghị mmalite nke oké iwe Chineke. (Mkpu 15: 1)
Up 19:15 - The agha heaven soro ya n'elu ịnyịnya ọcha, na ha na-yi uwe na-acha ọcha, n'ezi ákwà ọcha. Na-esi n'ọnụ ya wee a mma agha dị nkọ, nke na ọ ga tie mba, ọ ga-achị ha na a mkpanaka ígwè, ọ na-azọpịa Chineke, Onye Pụrụ Ime, n'idi-ọku na ọnụma (orge) nzọchapụta mmanya
Ná ngwụsị nke mkpagbu dechara ọnụma nke Chineke, na anyị na-ezute ya maka oge ikpeazụ mgbe Jizọs bịara merie ma merie n'imeri ndị iro ya n'Amagedọn.
Ọ bụrụ na chọọchị nwere nkwa nke na-echekwawo site na nke a domstid site ná mmalite ruo ọgwụgwụ, ya mere, ọ bụ nnọọ ihe doro anya na Church enweghị ike ịnọgide n'ụwa mgbe mbụ akara na-agbajikwa. Paul-egosi nke a mgbe e mesịrị na 2 Ndị Tesalonaịka, ebe ọ na-akụzi banyere ihe na-aghaghị mbụ ime tupu a domstid ga-elekọta ụwa.
Mkpughe 3:10 - N'ihi na unu na-edebe okwu m banyere ntachi obi, m ga na-ị na-azọpụta gị si hour ọnwụnwa, nke ga-abịakwasị ụwa dum ma na-ewetara ya ka ndị mmadụ ule.
A yiri nkwa e nyere ndị chọọchị na Tesalonaịka bụkwa ndị chọọchị na Philadelphia na Mkpughe.
N'ihi na ha nọ na-nwe-ayi okwu banyere ntachi obi, Jehova ga-chebe township nke (oak, si) na oge awa nke ikpe ahụ ga-abịakwasị ụwa. Okwu ahụ bụ "site" (ek) bụ otu ihe ahụ okwu dị ka 1 Ndị Tesalonaịka 1:10 nwaanyị, ma na-egosi na chọọchị ga-napụrụ, na anya site prövelsens mgbe.
Nkwa nke Chineke ụka na Philadelphia ekwe bụghị naanị oge nke oké iwe Chineke, ma nkwa Assembly na-chebere si dum hour nke ikpe nke ga-abịakwasị ụwa.
Apostasia - Waste ma ọ bụ ọpụpụ
2 Ndị Tesalonaịka 2: 3 - Ka onye ọ bụla duhie unu n'ụzọ ọ bụla. N'ihi na, mbụ, ndị n'efu ga-abịa na nwoke nke mmebi iwu, nwa adiana ke adiana, n'ihu ọha bịa n'ihu
Paul na-akụzi na ọgbakọ banyere otu ihe dị mkpa na bụrụkwa esemokwu, ya bụ na chọọchị pụrụ na-atụ anya na ụbọchị Jehova (mkpagbu) ga-abịa n'ihu atọ dị oké mkpa ga-eme:
The n'efu (apostasia) ga-abịa, bụ onye esetịpụ azụ ga-abịa na saịtị ahụ, na laglösthetens nwoke (àmà na-egosi) na n'ihu ọha bịa n'ihu (Mkpu 6: 1)
The ihe okwu apostasia
Okwu Grik a sụgharịrị n'efu, aghụghọ na nnupụisi bụ okwu "apostasia". Nke ozo bu "apostasia" sitere na ngwaa "afistämi" onye huvudbetydning "na-akpụ akpụ" ma ọ bụ "ime ihe si n'otu ebe gaa ebe ọzọ." The okwu na-eji kpọmkwem na njikọ na ihe ọ bụla na-akpali akpali site na otu ebe gaa ebe ọzọ, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ọ na-aga pụọ ​​ma ọ bụ dị iche iche site mmadụ.
Anyị na-achọta okwu apostasia naanị ugboro abụọ na NT, ebe ndị ọzọ bụ na Ọrụ 21:21 ebe ọ nta banyere "ahapụ Moses," ma ọ bụ si n'ezi ofufe dapụ si Moses. Ezie na noun apostasia bụ obere na NT, e nwere ngwaa afistämi na okwu na-ewepụtara site iri na ise ugboro. Naanị na atọ mgbe ọ na-ezo aka okpukpe si n'ezi ofufe dapụ. (1 Tim.1, Heb 3:12 na 2 Tim 2: 9).
Ndị fọdụrụ iri na abụọ mgbe ọ afistämi "pụọ," ma ọ bụ a onye (Luke 4:13; Ọrụ 12:10), site na ajọ omume (2 Timothy 2:19), si temple (Luke 2:37) ma ọ bụ n'ahụ (2 Cor 12: 8).
The mbụ nsụgharị
Na English Bible, na Amplified Bible, e nwere a odide ala ala peeji: "A ga-ekwe omume nsụgharị nke apostasia ice: Mbula (nke ụka).
The asaa mbụ English nsụgharị gị 1394 - 1608, onye ọ bụla a sụgharịrị ịbụ site n'okwu "ọpụpụ" (wezuga) iji na owuwe. Olee otú ọ bụ na King James Version dị ka otu n'ime ndị mbụ ndị sụgharịrị okwu n'efu kama nke ọpụpụ?
Apostasia mere mmepe
1576 wee Catholic translation n'ime English na-akpọ "Rheims Bible". Ọ bụ nke mbụ translation na-eji okwu n'efu kama nke ọpụpụ (ọpụpụ).
Kotolikerna-eji nke a translation na-ezo aka "n'efu" na tupu 1500 site na Ndozigharị.
Ọzọ, na 1611 mgbe King James Bible e bipụtara adi nsụgharị ha gara aga nsụgharị ọpụpụ imefusị na arụtụ aka Catholic Church na ozizi ya dị ka ndị si n'ezi ofufe dapụ. Ọ na-e otú bụghị na-amụ ma ọ bụ ihe okwu apostasia ndị kpebiri nke a, ma onye Ntụziaka na Catholic Church.
Owuwe - a kpọmkwem ihe omume
Gịnị bụ kpọmkwem Paul mgbe ọ na-akụzi banyere a kpọmkwem ihe omume nke ga-ewere ọnọdụ tupu mkpagbu?
Greek apostasia ya bụ nwere a kpọmkwem (nke bụ okwu Grik na-ejikarị bụghị) na-eme ka Pọl na-ekwu ka a akpan akpan gaghị agara omume, na ọ bụghị ihe na-eme karịrị oge.
Ọtụtụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ na-ekwu okwu na-agba akaebe na banyere n'ezi ofufe dapụ n'oge ikpeazụ. (1 Tim 4: 1-2, 2 h 3: 1, 1 Jọn 2: 1). Ihe bụ nsogbu bụ na ọ dịghị nke ndị a Akwụkwọ Nsọ na-enye nkwado maka a kpọmkwem n'efu ma ọ bụ a kpọmkwem ihe omume ka a mata ma na-a àmà doro anya maka ihe niile kwere ekwe na ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ. All akụkụ Bible na-ekwu banyere n'ezi ofufe dapụ n'oge ikpeazụ bụ n'ozuzu na-adịghị na-ezo aka a kpọmkwem ihe omume. Dị ka anyị maara, ọ bụ kama ndị n'efu na-enupu isi megide Jehova niile oge. Jude na-ekwu okwu banyere ya na-ama mere n'oge ndịozi. (Jude v 17 iche)
Owuwe, Otú ọ dị, a anya omume, na ihe na-anaghị eme eme n'elu a ogologo oge. Ọ ga-abụ a pụrụ iche agwa na-egosi na ọgwụgwụ ugboro na ọgwụgwụ e ruru.
Nkọwa nke Paul
2 Ndị Tesalonaịka 2: 6-7 - Ị mara ihe ọ dị ka a jidesie ya otú o nwere ike iputa na mgbe oge ya na-abịa. Ugbua, ihe omimi nke mmebi iwu na-arụ ọrụ. Onye a esetịpụ ya ga na-ekpochapụworị ndị na ụzọ.
Amaokwu 4-8 nke otu isi kpugheere àmà na-egosi, na onye na-esetịpụ ya azụ nke na ọ pụrụ bụghị n'ihu oge ya dị. Taa, anyị na-ede 2014, anyị nwere ike na-egosi na ya ma ọ bụ onye na esetịpụ azụ ka ebe a mgbe àmà na-egosi bụghị ma na-abịa n'ihu.
Asusu na-ejide ọzọ kọwara dị ka ma "na ọ" na "o". The okwu mmụọ Mmụọ Nsọ bụ okwu "pneuma" n'asụsụ Grik, nke bụ a okwu na-adịghị mmekọahụ. N'otu oge ahụ na Mmụọ Nsọ bụkwa Chineke, a kọwara ya dị ka a "o". E nwere ọtụtụ guesses na ihe na-egbochi àmà na-egosi, ma na ha abụọ bụ ndị enweghinke obu mgbe oke nwere ike ọ bụla ndị ọzọ karịa nke Mmụọ Nsọ.
Mmụọ Nsọ na chọọchị
Mmụọ Nsọ nwere njikọ chiri anya nke ụka, na kemgbe ebe ọ bụ na ụbọchị Pentikọst nke APG Chapter 2. GT yiri Mmụọ Nsọ nakwa n'ụwa, kama na ndị isi top. Dị nnọọ ka ọ ga-eme mkpagbu.
Mmụọ Nsọ ga-anọgide na-arụ ọrụ na ndị mmadụ na mkpagbu, ma si uppryckelsens oge site n'elu. Ya mere, anyị na-ahụ abụghịzi Mmụọ Nsọ-anọchi anya n'Isi nke 3 nke n'Akwụkwọ Mkpughe na karịrị. N'akwụkwọ ozi ndị na asaa ụka, anyị na-anụ okwu ndị a: Onye nwere ntị, ya nụrụ ihe mmụọ nsọ na-agwa ọgbakọ. Mgbe Ibuot 3, nke bụ Assembly owuwe bụ agaghịkwa Mmụọ Nsọ na-ekwu. Mkpughe 13: 9 - Onye nwere ntị, ya nụrụ. Ma ọ bụ na Mmụọ Nsọ nke na-abịa dị iche iche na nzoputa ma ozi ikpe ndị mmadụ n'ime mkpagbu ahụ, ọ ga-kama a ga-eme site na mmụọ ozi. (Mkpu 14: 6-7).
Mgbe Assembly na-ejide ndị na Mmụọ Nsọ nwere dịghị ebe na-arụ ọrụ site na ihe mgbe Assembly bụ naanị temple na Chineke maara taa. (1 3:16). Naanị chọọchị ahụ na-anọchi anya na mkpagbu ahụ na-skökoförsamlingen, na ike nke Mmụọ Nsọ na-adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ site n'èzí.
Owuwe na 2 Ndị Tesalonaịka 2:13
2 Ndị Tesalonaịka 2:13 - Ma anyị aghaghị ịdị na-ekele Chineke mgbe niile n'ihi na ị na umu-nne-hụrụ n'anya nke Jehova, n'ihi na Chineke site na mbu họpụtara gị nzọpụta site nsọ nke Mọ Nsọ na okwukwe nke eziokwu.
Eng trans. "Ma anyị kwesịrị-ekele Chineke mgbe niile n'ihi unu, ụmụnna mm hụrụ n'anya Jehova, Good N'ihi ị họọrọ, a mbụ mkpụrụ, n'ihi na nnapụta site n'ido nke Mmụọ Nsọ na okwukwe nke eziokwu."
Ihe mbụ na dị mkpa banyere na njikọ na amaokwu a bụ na ọ na kwuru ke ebuana ndị a eschatological akwụkwọ ozi kpugheere ozizi nke "ụbọchị Onyenwe anyị."
The antecedent isi (Chapter 2) Paul nanị kụziere ndị nọ n'ọgbakọ ihe onye nke mmebi iwu, nke ga-akpa na-abịa n'ihu n'ihu ọha ọkọnọ. Anyị na-ahụ àmà na-egosi iputa na mbu akara, na mgbe ịnyịnya ọcha egosi.
Ọ pụrụ ịbụ na a ekele maka nzọpụta na Pọl kwukwara n'amaokwu a, otu nzọpụta na ọ tantly kụziiri na akwụkwọ ozi abụọ na igosipụta iwe nke Chineke? Na nke a, ọ bụ ihe ọzọ na nkwenye nke Pọl ntighari isiokwu nke Assembly, ya bụ Chineke nzọpụta na ichebe iwe Chineke na mkpagbu.
Họrọ ka nzọpụta
Iji ghọta okwu a nke nzoputa (soteria) na Paul-eji, ị na-enwe na-akọwa ya dị ka oge ọ na-ịrịba ama na.
The okwu nzoputa (gr. Soteria) nwere ndị na-esonụ pụtara na eng; deliverence, ichebe, nchekwa, nzọpụta: nnapụta site molestation nke ndị iro.
Site na okwu na-eji na Old Testament, anyị pụrụ ịhụ na ihe okwu mgbanwe, n'ihu n'ihu anyị na-na oge ikwu na mgbe ndị ozi ahụ akwụkwọ e dere.
Nzọpụta na Old Testament
Na OT, anyị na-ahụ okwu 78 ugboro na a na-metụtara okwu Hibru Yeshu'ha. Ihe ka ọtụtụ nke ugboro okwu na-eji na Old Testament, na jikọọ na a na-ahụ nzọpụta si iro ma ọ bụ ruo nwa oge ọnwụnwa maka Israel.
Anyị na-ahụ ya n'etiti ndị ọzọ maka nnapụta a napụtara Izrel site n'Ijipt, ebe a, mgbe ha na-aga site Oké Osimiri Uhie. Ọ na-eji mgbe David napụtara na tọhapụrụ Sọl mkpagbu, na nzọpụta nke Israel si eke iro dị ka ndị Filistia, Moab na ndị Edọm.
Aịsaịa ji okwu a ma na-akọwa Israel ọsọ enyemaka na nloghachi nke Messiah, ma na-akọwa ime mmụọ na ọgbụgba ndụ ọhụrụ nke Jehova ga-eweta ya na Israel.
Nzọpụta na NT
The New Testament bụ okwu "Soteria" na-eji ma nke anụ ahụ ize ndụ (Ọrụ 7:25, 27:34), kama n'elu ihe niile site na-akọwa mmụọ nzọpụta anyị natara site na ọnwụ Jizọs na cross. (Phil 1:28, 2 Cor 7:10 Efe 1.13)
Anyị pụrụ ịhụ na a pụtara okwu nwere ike ịbụ ma a ime mmụọ nzọpụta, na a na-ahụ nzọpụta si a nwa oge ize ndụ ma ọ bụ ọnọdụ. The GT bụ ukwuu n'ime a anụ ahụ ihe ize ndụ mgbe ọtụtụ ndị NT anọchi a echiche nke ime mmụọ nzọpụta.
Oge ndị Tesalonaịka
The New Testament e dere karịrị otu oge nke banyere afọ 60, site dị iche iche ndị dere ya. The ihe okwu nzoputa (soteria) nwere ike kọwaara ma na ikwu na oge e dere ya, na site na nke na-ede akwụkwọ na-eji okwu.
Pọl degaara akwụkwọ ozi ya a oge nke banyere 20 afọ, ọ bụ ya mere eke na okwu dabara ụfọdụ mgbanwe nke ya mkpa karịrị oge. N'ụzọ dị iche na ụfọdụ Pọl mesịrị degaara ndị Rom, ihe atụ, ebe okwu fọrọ nke nta mgbe eji na mkpa nke ime mmụọ nzọpụta, bụ akwụkwọ ozi Thessalonica, otu n'ime ihe Pọl mbụ akwụkwọ ozi.
Paul mbụ akwụkwọ ozi
N'oge Pọl n'oge akwụkwọ ozi leta Thessalonica na Galeshia, mgbe na-eji okwu 'Soteria' iji gosi na a ime mmụọ nzọpụta. The okwu nwekwara adịghị James bụ ndị na-na-e dere na nzọụkwụ mbụ na akụkọ ihe mere eme nke Church. Paul kama na-eji ndị ọzọ okwu, n'oge a na oge na-akọwa mmụọ nzọpụta dị ka "kaleo" Gal 1: 6, "Dikaio-oe" Gal 2:16, "exagorazo" Gal 3:13 wdg
The akwụkwọ ozi eleghị anya e dere mgbe letters ndị Tesalonaịka bụ 1 Ndị Kọrịnt, ebe okwu "Soteria" na-mgbe na-eji. Ọ bụ naanị na nke abụọ Pọl degaara akwụkwọ ozi ndị chọọchị na Kọrịnt okwu eji ọzọ. Okwu mee ihe n'ebe a ugboro atọ, na nke ahụ bụ mgbe mbụ anyị na-ahụ okwu na-eji na njikọ na ime mmụọ nzọpụta.
Ọ anya dị ka na mgbe Pọl na-eji okwu a na ya n'oge akwụkwọ ozi, ọ ka na-enwe mmetụta otú GT-eji okwu a, ma si otú bụ nkọwa nke a na nzọpụta si a anụ ahụ ma ọ bụ a nwa oge ize ndụ ma ọ bụ ọnọdụ. Mgbe Paul na mgbe e mesịrị akwụkwọ ozi iji okwu a bụ na ọtụtụ betydning nke ime mmụọ nzọpụta.
Brevens site isiokwu
Onye ọ bụla isi nke 1 na 2 Ndị Tesalonaịka igosipụta ọ bụla pụtara nloghachi nke Jesus, na Pọl eschatological-ezi ihe. N'ihi ya, ọ bụ na ndị ọzọ okwu metụtara ikwere na nzọpụta a na Pọl na-ezo aka na 2 Ndị Tesalonaịka 2:13, nwekwara kwupụta na bụ a n'ihu nke isiokwu, Paul na-akụzi.
A nyochaa nke 2 Ndị Tesalonaịka isi nke 2 na-egosi na isi na-enye:
1. A ịdọ aka ná ntị (vs. 1-3)
3. emebi iwu apụta (vs. 3-5)
4. The egbochi (vs. 5-7)
5. àmà na-egosi performanc na mbata (vs. 8-9)
6. ịmụ anya arọ nrọ na aghụghọ nke ndị mmadụ (amaokwu 10-12)
7. A ekele Jehova, a oku na-aga (vs. 13-15)
Ya mere nke a bụ ihe banyere uppryckelsens taa na ọdịnihu anyị otuto, dị ka na-eme mgbe oge mgbe Jehova akwusila ya ọgbakọ, ọ na-agbanwe anyị na ozu na-adị ka ya. Amaokwu a bụ n'ihu nke amaokwu iri na abụọ, na bụ a doro anya njikọ uppryckelsens ụbọchị.
Paul-ekwu na tupu ụbọchị nke Onyenwe anyị ma ọ mkpagbu nwere ike, nwere, iwu onye (àmà na-egosi) na-abịa n'ihu. Ma n'ihi na àmà na-egosi ga-enwe ike na-abịa n'ihu, ọ ga-ejide ya azụ bịa n'akụkụ (Mmụọ Nsọ), na Mmụọ Nsọ na-enwe ike bịa na saịtị ga-akpa Assembly na-anapụ na-arahụ site n'ụwa.
Vecka 24, fredag 18 juni 2021 kl. 04:17